Akụkọ - CHANGYU-HW osisi - Ọkachamara plywood Manufacturer si China
CHANGYU-HW osisi –A ọkachamara plywood Manufacturer si China
CHANGYU-HW osisi bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na-emebe, n'ichepụta na-emepe emepe iche iche nke plywood, film chere ihu plywood, LVL na ihe ọ bụla ọzọ plywood. A na-ejikarị ya eme ihe n'ime ime mpempe akwụkwọ, ime ụlọ, ihe owuwu ụlọ, pallet, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa.
Dabere na uru nke isi nke plywood na n'ikwekọ na ọnọdụ ụlọ, enwere ike iji ngwaahịa a ọtụtụ oge. N'ihi ya, anyị na ngwaahịa na-sell ọma na Italy, Germany, France, Australia, Canada, America, Japan, Britain, na Middle East wdg CHANGYU-HW osisi e tinyere na-amị na ahịa dị iche iche plywood na osisi na ngwaahịa kemgbe 2002. Onu ogugu onu ahia nke mbupu anyi di n'etiti mita 3 na 5 puku cubic kwa ọnwa ugbu a. Site na mmụba nke azụmahịa anyị na mgbatị nke ahịa ụwa, ejirila CHANGYU-HW WOOD zute mkpa mmepe ụlọ ọrụ anyị ma melite ikike anyị na ọrụ ndị ahịa na ọrụ azụmahịa.
Ọganihu ngwa ngwa nke akụ na ụba China aghọwo ihe siri ike iji kwalite ọchịchọ nke ahịa plywood.
Osisi sitere na oke ohia na-eto eto na oke osisi di na North China, East China na etiti na ala nke Osimiri Yangtze abanyela n'ahịa buru ibu, yana mgbakwunye na-aga n'ihu nke osisi sara mbara dị elu si mba ọzọ, inye otutu akụrụngwa maka na-aga n'ihu mmepe nke China si plywood ụlọ ọrụ. Shandong na ugwu Jiangsu, dika Xuzhou, aburula ebe plywood bu isi emeputa.
Inye ego ụmụ mmadụ zuru oke bụkwa ihe dị mkpa na-akwụ ụgwọ nke ụlọ ọrụ plywood nke China ma e jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ na-emepụta plywood.
Ogo nke ngwaahịa plywood nke China n'onwe ya ka emeela ka ọ dịwanye mma, na-eme ka ọ na-asọ asọmpi n'ahịa mba ụwa.
China abụghị naanị nnukwu onye na-ebupụ plywood, mana ọ bụkwa onye na-emepụta plywood kachasị ukwuu n'ụwa.
3lọ 3-135, Jushan Road, Donghu Street, Pizhou City, Jiangsu Province, China